လင်းယံခ: May 2013
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:41 AM
ထင်လင်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပေါ်လီယာနာအကြောင်း စာအုပ်လေးပါ။
ဆောင်းဆိုထားတဲ့သူ ရှိလို့ ထင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေအောင်လို့ လင့်ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့လင့်မှာ သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:21 AM
အရင်နည်းက တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ အဆင်မပြေဘူးဗျ....
ကျွန်တော့်ဖုန်း အပါအဝင်ပါဘဲ။ ဒါနဲ့ လျှောက်မွှေရင်း အခုနည်းက တော်တော်ကို အဆင်ပြေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာတော့ အဲဒီအတိုင်းထည့်ပြီး အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်တာ တန်းပြီးတော့ကို 3G တက်လာတော့တာဘဲ။ လိုင်းကလည်း တော်တော်ကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်ဗျ...
အရင်နည်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူများ အောက်ကနည်းအတိုင်း ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:48 AM
ခင်ဗျား..... ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ အံ့သြနေလိမ့်မယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ???
ကျုပ်တို့အားလုံးဟာ အဆုံးအစမရှိတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။
လူဦးရေ အားလုံးရဲ့ (၁)ရာခိုင်နှုန်းက ကျန်တဲ့ (၉၆)ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ ငွေကြေးတွေကို ရရှိနေတာ ဘာကြောင့်လဲ???
Oxford Advanced Learner's Dictionary for Android
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 8:49 AM
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို ကူညီရင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့တာပါ။ နာမည်ကြီး Oxford Advanced Learner's Dictionary ကို Android ဖုန်းထဲမှာ အသုံးပြုလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးထားတာပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေး 2Mb ကျော်ကျော်သာရှိပေမယ့် အသုံးပြုဖို့အတွက် အင်တာနက်ကနေ စာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို download ဆွဲပေးရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက မသုံးတတ်ဘူးဖြစ်နေကြလို့ အသုံးပြုနည်းကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:09 AM
လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ရောင်စုံခြယ်တိုင်း
ရှိခိုးလိုက်ပါတယ် အမေ.... _/\__
Androidသမားများ အသုံးတည့်ရာ Sm³ Directory
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:34 PM
ဒီ apk လေးကို သိတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို မသိတဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စတဲ့ မြို့ကြီးနှစ်မြို့အပါအဝင် အခြားမြို့များပါ ပါဝင်တဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးပါ။ အရမ်းကို အသုံးတည့်တာမို့ မိတ်ဆွေတို့ စက်ထဲမှာ ရှိသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:46 AM
Microsoft Security Essentials Update (17/5/13)
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:42 AM
Microsoft Security Essentials အသုံးပြုသူများအတွက် Update File လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Antivirus ဆော့ဝဲလ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း update ဖြစ်နေမှ အဆင်ပြေတာ။ မဟုတ်ရင်တော့ ကွိသွားလိမ့်မယ်။ Virus ဝင်လာရင်ပေါ့...
32bit ရော 64bit အတွက်ပါ နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် တင်ပေးထားတယ်နော်....
Android ဖုန်းများအတွက် ADM Pro
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:22 PM
Android သမားများအတွက် Download ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ apk လေးတစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ကွန်ပျူတာမှာ ဆိုရင် IDM လို့ပေါ့ဗျာ...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:04 PM
Adobe Photoshop CS4 အသုံးပြုနည်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:24 PM
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ Adobe Photoshop CS4 အသုံးပြုတဲ့နည်း စာအုပ်လေးပါ။
သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း အကျိူးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Myanmar Wiki စွယ်စုံကျမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:59 AM
ဒီအခွေလေးကတော့ ဝီကီပီးဒီးယား လို့ခေါ်တဲ့ အခမဲ့လွတ်လပ်စွယ်စုံကျမ်း အခွေလေးပါ။ စွယ်စုံကျမ်းဆိုတဲ့ အတိုင်း ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်က ထင်ရှားကျော်ကြားမှုများသာမက အခြားသော အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍမျိုးစုံကို ထည့်သွင်းပေးထားမို့ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
Install လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူသလို အသုံးပြုရာတွင်လည်း လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ Myanmar3Font ရှိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီပုံကို မြင်လိုက်တာနဲ့ Apple ရဲ့ဖခင်ကြီး Steve Jobs ဆိုတာကို လူတိုင်းသိမှာပါ။ တကယ်ကို ထူးချွန်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် လေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Format Factory Version 3.0.1.1
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:59 PM
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ဖိုင်မျိုးစုံကို မိမိကြိုက်ရာ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:49 PM
ကျွန်တော့်ဆိုက်ကို လာရောက်သူအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ...
ကျွန်တော် အရင်က ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ blog တစ်ခု ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသစ်ရေးဖို့ စိတ်ကူး ရှိပြီးသားမို့ လင်းယံခ နာမည်နဲ့ အသစ်ပြန်ထောင်လိုက်တာပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:34 PM
အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းကနေ Facebook ကို အသုံးပြုတာ များလာပါပြီ။ အဲဒီအခါ တစ်ခါတစ်လေကျရင် facebook ထဲက ပုံတွေကို ဒေါင်းချင်တာမျိုးကြုံလာတဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူ ဒေါင်းနိုင်ဖို့အတွက် Facebook Downloader လေးရှိပါတယ်။
E-book တွေဖတ်ရှုဖို့ Adobe Reader X1
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:26 PM
ကွန်ပျူတာနဲ့ စာအုပ်ဖတ်ရတာ သိပ်တော့ အရသာမရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အပြင်မှာ ရှာလို့မရတဲ့ စာအုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖတ်ရတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဆော့ဝဲလ်က အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရင် စိတ်ညစ်ရပြန်ရော။
Viber နောက်ဆုံးထွက် version
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Viber နောက်ဆုံးထွက်ပါ။ နောက်ပြီး computer ပေါ်မှာလည်း သုံးလို့ရအောင် ဆော့ဝဲလ်တစ်ခါတည်း တင်ပေးထားပါတယ်။
Windows 8 မှာ Gtalk ကို တစ်ခုထက်မက ဖွင့်လို့ရအောင်
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားသုံးရင်တော့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် မိမိစက်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် Gtalk ကို install လုပ်ပြီး သုံးသူတွေအတွက်ကတော့ Gtalk ကို တစ်ခုထဲဖွင့်လို့ရတဲ့ ပြဿနာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ကျန်တဲ့ Windows တွေမှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် Windows 8 ကျရင်တော့ Gtalk shortcut ရှာလို့ မတွေ့တဲ့သူတွေအတွက် အောက်ကနည်းအတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Glary Utilities 3.0 Full Version
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:35 PM
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတဲ့ ဆောဝဲလ်လေးပါ။ သေးသလောက်လည်း စွမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လက်စွဲပေါ့ဗျာ...
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Update တစ်ခါတည်း လုပ်ပေးလိုက်ရင် ပိုပြီးသုံးလို့ ကောင်းမှာပါ။
Internet Download Manager 6.15 build9full version
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:55 AM
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် version လေးပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ Android App များကို အသုံးပြုကြည့်ရအောင်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:19 AM
ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ android app များကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးရဲ့ အားသာချက်ကတော့ apk များရဲ့ အသုံးပြုပုံ၊ ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို ဖုန်းထဲမှာထည့်မသုံးခင် ကွန်ပျူတာနဲ့ အစမ်းသုံးနိုင်တာပါ။
အားနည်းချက်ကတော့ Android Version 2.3.4 ဘဲရှိတဲ့အတွက် Version မြင့်တဲ့ apk တွေကိုတော့ အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
မင်းနဲ့ကိုယ် ငယ်ငယ်တုန်းက ထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါတို့ အလယ်တန်းစတက်ကတုန်းက ထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။
လင်းယံခ (မြန်မာစာ) V2.0. apk download
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:44 AM
အရင်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ apk က မြန်မာစာဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် version လေးမြှင့်ပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဖတ်ရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် download လုပ်ပြီး update လေးလုပ်ပေးပါလို့...
Mirror Download Link 1 (Mediafire)>> linnyankha v2.0.apk download
Mirror Download Link2(Dropbox)>> linnyankha v2.0.apk download
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:11 PM
တစ်ချို့တစ်ချို့က အမေ မရှိတော့ကြဘူး။
တစ်ချို့တစ်ချို့က အမေရှိလျက်နဲ့ သတိမရကြဘူး။
တစ်ချို့တစ်ချို့က အမေတွေနဲ့ ဝေးနေကြတယ်။
Twilight Over Burma (ခ) မှုန်ရီဆိုင်း တိုင်းမြန်မာ E-book
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:43 AM
ဒီ "မှုန်ရီဆိုင်း တိုင်းမြန်မာ"စာအုပ်ရဲ့ မူရင်းစာအုပ်အမည်က "Twilight Over Burma" ဖြစ်ပါတယ်။
လင်းယံခ apk download link
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:16 AM
အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ လင်းယံခ Android Application ကို ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်လည်း ကျွန်တော် ဒီ လင်းယံခဆိုက်မှာဘဲ ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ အရင် ရွှေမန်းသားလေး apk ကို ဖျက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာနိုင်စေဖို့ အတွက်ကတော့ ဆိုက်ကို မဖျက်ဘဲ ထားထားပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ရေးသမျှပိုစ့်တွေကိုတော့ ဒီ လင်းယံခဆိုက်မှာဘဲ ရေးတော့မှာပါဗျာ...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:50 AM
တစ်နေ့သ၌ ကွန်ုပ်၏ အခန်းတွင်းသို့ ကိုထွန်းဟု အမည်ရသောသူသည် ကျွန်ုပ်၏ တပည့်တစ်ဦးနှင့်အတူ အလည်ရောက်ရှိလာလေ၏။ ကျွန်ုပ်၏ တပည့်ကလေးမှ သူ၏ သူငယ်ချင်း ကိုထွန်းနှင့် ကျွန်ုပ်အား မိတ်ဆက်ပေးလေ၏။ သူသည် စကားပြောလျှင် လွန်စွာပွင့်လင်းဖော်ရွေစွာ ပြောဆိုတတ်သော အညာသားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်လေ၏။ သူ့ကို ကြည့်ရသည်မှာလည်း လွန်စွာ ရိုးသားပုံရလေ၏။ အသောက်အစားလည်း ကင်းပုံရ၏။ အလုပ်ကိုလည်း သူများထက်ပို၍ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားပုံရလေ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောက်ရှိခိုက်တွင် ဗေဒင်မေးသွားမည်ဟုဆိုကာ ကျွန်ုပ်ဗေဒင်ဟောပြောသော ခုံရှေ့တွင် ၀င်ရောက်ထိုင်လေ၏။
မိမိတစ်ဖက်သတ် တိတ်တခိုး ချစ်ကြိုက်နေသူမှ မိမိကို ပြန်လည် စိတ်ဝင်စားလာစေသောနည်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:49 AM
ကျွန်တော့်ဆီကို အမျိုးသမီးတစ်ဦး မေးလ်ပို့လာတယ်။ ဆရာတဲ့ ကိုယ်တစ်ဖက်သတ် စွဲလန်းနေတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုပြန်ကြိုက်လာအောင် ပြန်ချစ်လာအောင် ဘယ်လို ယတြာချေရမလဲတဲ့။ ယတြာတွေကတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့ကြတော့ ဒီစကားကို အပြစ်တင် ချင်တင်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေ အတွက်ကတော့ ပြဿနာမရှိဘူး။ ကိုယ်က မိန်းကလေး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခက်အခဲ ရှိတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:48 AM
တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့ အိမ်ထောင်ပြုမယ့် အသက် နဲ့ ခင်ဗျားက ဘာနေ့သားလဲ။ အဲဒီနေ့ရဲ့ ဂြိုဟ်သက်ရယ် ပေါင်းလိုက်ပေါ့။ ပြီးရင် အဲဒီပေါင်းလို့ရတဲ့ ကိန်းကို (၇)နဲ့ စားလိုက်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြွင်းလဲ။ အကြွင်းအတိုင်း ကြည့်ပြီး ခင်ဗျား ဘယ်အသက်အပိုင်းအခြားမှာ အိမ်ထောင်ပြုရင် ဘယ်လို မိန်းမ မျိုးနဲ့ ရမယ်ဆိုတာ တွက်ကြည့်လို့ရပြီ။
အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေသော ယတြာ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:45 AM
အိုးချင်းထားတော့ အိုးချင်းထိ - ကြိုးချင်းထားတော့ ကြိုးချင်းငြိ
အတာအိုးကလေး နှစ်လုံးကို တစ်လုံးတွင် ရွှေရောင် သုတ်ရ၏။ နောက်တစ်လုံး ကို ငွေရောင် သုတ်ရ၏။ ရွှေရောင် အိုးလေးတွင် ယောက်ျားလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပရ၏။ ငွေရောင် အိုးကလေးတွင်မူ မိန်းကလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ရ၏။ ထို့နောက် ယောက်ျားလေး၏ ရွှေရောင် အိုးလေးထဲတွင် သူ၏ မွေးနံပန်းများကို ဂြိုဟ်သက်အလိုက် ထည့်ရ၏။ မိန်းကလေး၏ ငွေရောင် အိုးကလေးထဲတွင် လည်း မိန်းကလေး၏ မွေးနံပန်းများကို ထည့်ရ၏။ မွေးနံပန်းများကို သိစေချင်သောကြောင့် အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ၏။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:44 AM
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်လာပြီဆို ဒီလူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်လို့လား၊ အပျော်တွဲမှာလား၊ စဉ်းစားပေးရင်ကောင်းမလား၊ ပြန်ချစ်သင့်လား၊ ပြန်မချစ်သင့်ဘူးလား၊ သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲ စသဖြင့် မိန်းကလေးတိုင်း တွေဝေတက်ကြပါတယ်။ ချစ်မိလို့ ရွေးခြယ်မိပြီဆိုလဲ ဒီလူငါ့ကို တကယ်မှ ချစ်ရဲ့လား။ ငါချစ်သလောက်ပြန်ချစ်ရဲ့လား စတဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့ ရတက်မအေးတက်ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် ပျိုမေက ကူညီပြီးဒီဗေဒင်လေးကို ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်တယ်နော်။အလွယ်လေးပါပဲ။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်စကားပြောလာတဲ့သူရဲ့ နာမည်ကိုဗျည်းတစ်ခုစီရဲ့ နေ့နံဂဏန်းပြောင်းလိုက်ပါ။
နေ့နံ ဂဏန်းကို တော့သိမယ်ထင်တယ်နော်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:43 AM
အခုတလော ကျွန်တော်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေအမျိုးသမီး တော်တော်များများ မိမိတို့၏ အမျိုးသားများ မိမိတို့နေအိမ်မှ ထွက်သွားသဖြင့် အတော်လေး ပူပင်သောက ရောက်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ထိုကိစ္စအတွက် နေ့စဉ်အချိန်နှင့်အမျှ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိ၏။ မြန်မြန်ပြန်လာစေချင်တော့၏။ ယတြာအနေနှင့် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပြုလုပ်ပေးချင်မိ၏။ သို့သော် စဉ်းစားစရာ တစ်ခု ရှိနေသည်မှာ အားလုံးသော သူများသည် မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ရောက်ရှိနေကြ၏။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် ဆိုသည်မှာ ယတြာ လုပ်ရသည်မှာ ခက်ခဲလေ၏။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:29 AM
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အပါအ၀င် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် ဆရာ စံဇာဏီဘို၊ နက္ခတ်သိပ္ပံအဖွဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာ နက္ခတ်သိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇေယျာကိုတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားသည်များနှင့် သင်္ကြန်စာပါ ဟောကိန်းအချို့ကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ငွေမြဲစေသော အဆောင်၊ လာဘ်ရွှင်စေသော အဆောင်၊ ချစ်ကံကောင်းစေသော အဆောင်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:27 AM
ကျွန်တော့်အခန်းမှာ ဗေဒင်လာမေးသော မိတ်ဆွေများကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ထုပ်ထားတာပါ။ အွန်လိုင်းက မိတ်ဆွေများလဲ အဆောင်ဆောင်တာ ၀ါသနာပါတယ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာ သေသေချာချာ ကူးပြီး ပလပ်စတစ်လောင်းပြီး ဆောင်ထားကြပေတော့ဗျို့....
၁၃၇၅ မှာ လုပ်ငန်းစီးပွားကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:24 AM
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများသည် ရာထူးတိုးရန် ၊ အလုပ်နေရာကောင်း ၊ အခွင့်အရေးကောင်းများရရန်၊ ဆုထူးဘွဲ့ထူးများ ရရန်နှင့် အလုပ်လျှောက်ခြင်း ၊ အင်တာဗျူးဖြေခြင်း၊ လေလံဆွဲခြင်း၊ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ အပြောင်းအရွေ့ စသည်တို့၌ အထူးအားပြု ကြိုးစားသင့်ပါည်။
တနင်္လာသားသမီးများသည် နာမည် ဂုဏ်သတင်း ထင်ပေါ်ကျော်ဇောရန်နှင့် လူအမျာ၏ ချစ်ခင်လေးစား ယုံကြည် ကိုးစားမှု့ကို ရရှိရန်နှင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့ရန် စသည်တို့၌ အထူးအားပြု ကြိုးစားသင့်ပါသည်။
၂၀၁၃-ခု၊ မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:15 AM
ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ ရှေ့လျှောက်တော့ နေ့တိုင်း တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်ဗျာ...
အခုလအတွက် ဟောစာတမ်းကိုတော့ ဆရာ ဟိန်းတင့်ဇော် (မဟာချိုင်)၏ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် ကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ။ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် စည်ကားသော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀င်တတ်သည်။ သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။
Windows 8 မှာ Gtalk ကို တစ်ခုထက်မက ဖွင့်လို့ရအောင်...
ကွန်ပျူတာနဲ့ Android App များကို အသုံးပြုကြည့်ရအော...
Twilight Over Burma (ခ) မှုန်ရီဆိုင်း တိုင်းမြန်မာ ...
မိမိတစ်ဖက်သတ် တိတ်တခိုး ချစ်ကြိုက်နေသူမှ မိမိကိုြ...
သင်လက်ထပ်ယူမယ့် မိန်းမအကြောင်း နှင့် သင့်အိမ်ထောင်...
ငွေမြဲစေသော အဆောင်၊ လာဘ်ရွှင်စေသော အဆောင်၊ ချစ်ကံကေ...